Izindaba - Silicon carbide ceramic pump
Ngenxa yobulukhuni bayo obuphakeme, ukumelana nokugqwala okuphezulu namandla okushisa aphezulu, i-silicon carbide ceramics isetshenziswe kabanzi. Kukhona ikakhulukazi lezi zinto ezilandelayo: i-silicon carbide ceramics inokumelana okuhle nokugqwala kwamakhemikhali, amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-coefficient encane yokushayisana, nokumelana nokushisa okuphezulu, ngakho-ke kuyinto ekahle yokukhiqiza amasongo wokuvala uphawu. Uma ibhangqwe nezinto ze-graphite, i-coefficient yayo yokushayisana incane kunaleyo ye-alumina ceramics nama-alloys aqinile, ngakho-ke ingasetshenziswa kumanani aphezulu we-PV, ikakhulukazi ezimeni zokusebenza zokuhambisa ama-acid aqinile kanye ne-alkalis.
Iphampu ye-ceramic ye-Silicon carb ine-hardness ephezulu, amandla aphakeme, izinga lokushisa eliphakeme nokumelana nokugqwala, nezinye izici, uma kuqhathaniswa nempilo yesevisi yempompo yensimbi ejwayelekile, endaweni efanayo yesiteshi iphindwe kaningi isikhathi sayo senkonzo noma ngaphezulu.
Ukuqamba kwesayensi nobuchwepheshe kungukuncintisana okuyisisekelo kwamabhizinisi empompo we-silicon carbide ceramic. Ngokuwohloka komnotho waseChina eminyakeni yamuva nje, amabhizinisi amaningi okukhiqiza angathemba ukuvuselelwa kwezomnotho ngaphezu kokulawula izindleko zokukhiqiza. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi esimweni esinzima somnotho, abakhiqizi abafanele kufanele bandise ukuqina kwezesayensi nezobuchwepheshe, kuyilapho kusuka kukhwalithi, izindleko nocwaningo nentuthuko, nezinye izici zemizamo yokuqeda izingqinamba emakethe.